ရွှေတိဂုံဘုရားနှင့် သမိုင်းဝင်ဓမ္မစေတီကျောက်စာ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » ရွှေတိဂုံဘုရားနှင့် သမိုင်းဝင်ဓမ္မစေတီကျောက်စာ..
Posted by amatmin on Feb 22, 2012 in History | 11 comments
ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်ကို အခေါက်ခေါက်ရောက်နေပေမဲ့ သမိုင်းထဲက မှတ်တမ်းတချို့ကို မသိခဲ့တာအမှန်ပါ.။ ဒီနှစ် ရဲ့အစပိုင်းတုန်းက ကိုပေါက်တင်ဖူးတဲ့ “မြန်မာပြည်၏.. ” ဆိုတဲ့ပို့စ်မှာ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်ကိုဧည့်သည်တယောက်လိုက်ပို့တော့ ဘုရားပေါ်မှာဘာရှိမှန်းမသိလို့ ဒုက္ခရောက်ရတယ်လို့ကွန်မန့်ပေးပြီးဒီလိုလေးညည်းမိတော့ကာ..
နှစ် ၂၆၀၀ ပြည့်ပွဲမကြာခင်ကျင်းပမယ်ဆိုတာဘုရားရင်ပြင်မှာရေးထားတာ တွေ့မိတယ်..အဲဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး တလောလေးကအမေးခံလိုက်ရတာလေး ပြောပြချင်သား..
ဧည့်သည်တယောက်လာ လို့ ရွှေတိဂုံလိုက်ပို့ပေးတော့ ဘုရားဖူးရင်းသူကသိချင်တာလေးတွေမေးတော့ ကြားဖူးသလောက်လေးရှင်းပြရင်း
ဘုရားပေါ်က နှစ်၂၆၀၀ပြည့်ပွဲတော် ဆိုတာတွေ့မိတော့ သူ့ကိုရှင်းလည်းပြလိုက်ရော.
အဲဒီ နှစ်၂၆၀၀ ထိ ထိန်းသိမ်းလာတဲ့ တစုံတရာ(ဘုရားပုံ)ကိုမြင်ဖူးချင်ပါတယ်တဲ့.. အပြင်မှာတော့ မရှိဘူး ဆံတော်ကိုအထဲမှာမြုပ်နှံလှူထားတာလို့
(ကိုယ်သိသလိုပဲ) ပြောလိုက်ရတယ်.ဒါနဲ့ဘုရားဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေမှာတော့ နှစ်ပေါင်းရာကျော်
ပုံတော့ရှိမှာဘဲဆိုပြီးပြခန်းကိုခေါ်သွားလိုက်တာ ၁၉၀၀ ကျော်က ပုံမှတ်တမ်းကအစောဆုံးတဲ့..
ဘုရားပတ်လည်ကကြားဖူးနားဝရှိတဲ့ တန်ဆောင်းတွေ ကိုပတ်ရှာတော့လည်း မထူးခြားနား.
ကိုယ့်ယုံကြည်မှုအရတော့ ဆံတော်နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ကိုလက်ခံနိုင်ပေမဲ့ သူတို့ဘယ်လိုများတွေးမလဲ စဉ်းစားကြည့်တော့လည်း တမျိုးကြီးဗျ..
့်သိတဲ့လူများ ပြောပြရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ..။
ဒါနဲ့ဆက်စပ်ပြီး သဂျီးကဘုရားပေါ်မှာရှိတဲ့ သက်တမ်းအရှည်ဆုံးလို့ ထင်မြင်စရာရှိတဲ့.အထောက်အထားလည်းခိုင်လုံတဲ့
ဘုရင်မကြီးရှင်စောပု (၁၄၅၃-၁၄၆၀)က တည်ခဲ့တယ်ယူဆမိပါတယ်..။ သမိုင်းသက်သေအထောက်အထားလည်း ရှိတယ်..။ပြလို့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်..။ အောက်မှာ ကုဒ်ထားပေးတယ်..။
အဲဒီ ပို့စ်ထဲမှာပဲ ကိုကြောင်ကြီးကလည်းဒီလိုမျိုးဝင်အားဖြည့်ပေးထားတယ်ဗျ..
သိသလောက် မူလစေတီအမှတ်အသားကို နှောင်းလူများ အဆက်ဆက် ပိုမိုကြီးမားတဲ့ စေတီပုထိုးတော်များနဲ့ ငုံပြီးတည်ထား ဘွဲ့တော်အသစ်များ ဆပ်ကပ်လှူဒါန်းကြတာပါ။ အစဉ်အဆက် ယုံကြည်မှုအရ ဘုရားစေတီများ မဖျက်ကောင်းဆိုတဲ့ အယူအရလည်းကောင်း၊ စစ်မှန်တန်ခိုးကြီးတယ် အောင်မြေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုအရ လည်းကောင်း ခေတ်အဆက်ဆက် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ နှစ်၂၆၀၀ ဆိုတာ မှားတယ်ပြောလို့ မရဘူး၊ သို့သော် ဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့်ကိုတော့ ပြောပြသင့်တယ်။
ကျနော်အမြင်အရတော့ ရွှေတိဂုံစေတီကိုရှေးကျပြီးနှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ တိုင်ရှိနေပြီလို့ ပြောပြရတာကို ပိုသဘောကျတာအမှန်ပါ။ ပြီးတော့.. ကျနော်တို့ လက်ခံထားသလို သူတို့လက်မခံနိုင်တောင်မှ ကိုယ်တွေဘာသာဂုဏ်ယူနေတတ်ဖို့ သမိုင်းအထောက်အထားတွေ ရနိုင်သလောက် မှန်ကန်နိုင်သလောက်
ရွှေတိဂုံစေတီနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ ဓမ္မစေတီကျောက်စာကိုထွင်းခဲ့တာ အေဒီ-၁၄၃၀ကျော်ကာလတွေဆိုတော့ကာ လက်ရှိအချိန်နဲ့တွက်ရင်နှစ်ပေါင်း၆၀၀နီးပါးလို့ ဆိုရမှာပေါ့.။
ကျောက်စာပါမှတ်တမ်းတွေအရဆိုရင် ဘုရင်မကြီးရှင်စောပုနဲ့သမက်ဓမ္မစေတီမင်းတို့က ဘုရားကိုတည်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲ
သေချာတာတော့ ရွှေတိဂုံဘုရားသက်တမ်းက အနိမ့်ဆုံးနှစ်ပေါင်း၆၀၀ တော့ရှိမှာပဲ။
နောက်ပြီးဒေါက်တာသန်းထွန်းတော့မဟုတ်ပေမဲ့ အင်္ဂလန်ကနေပဲ အရှေ့တိုင်းပညာနဲ့အမ်အေဘွဲ့ယူလာခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာတင်လှသော်ရဲ့ စာတမ်းတစောင်မှာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ရဲ့သက်တမ်းကို ခန့်မှန်းရာမှာ နှစ်ပေါင်း၆၀၀ ထက်မပိုနိုင်လို့ပါခဲ့ဖူးတယ်။ သူခန့်မှန်းခဲ့တဲ့ အချက်တွေမှာ အဓိကအားဖြင့်စေတီတည်ဆောက်မှုကိုခေတ်ပြိုင်လက်ရာများ နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီးသတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီမှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တာကတော့ ဘုရားစေတီများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရာမှာ မူလလက်ရာကိုငုံပြီးမှ အပေါ်ကပြန်လည်အုပ်ပြီးမွမ်းမံရတာဆိုရင်တော့ မူလလက်ရာက ပျောက်ကွယ်သွားမှာအသေချာပဲ.။
ပြီးတော့သူ့စာတမ်းကလည်းအငြင်းအခုန်တော့ များနေဆဲပါပဲ။ အထက်ပါအချက်နှစ်ချက်ကရွှေတိဂုံဘုရားရဲ့သက်တမ်း ကို နှစ်ပေါင်း၆၀၀ ခန့်လို့သတ်မှတ်သူတွေကိုးကားတဲ့အချက်တွေပေါ့။
နောက်ထပ်လည်းများစွာ ရှိအုံးမှာပါ..။ အောက်မှာ ကျောက်စာပုံတွေကို တင်ပေးထားပါတယ်..။
ဓမ္မစေတီကျောက်စာထားရှိရာ အဆောင် (နောင်တော်ကြီးဘုရားအနီး/တနလာင်္နံထောင့်)
တဖန်နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ ဖြစ်ကြောင်းကွင်းဆက်ရှာဖို့အတွက်ဆို တခြားသောများပြားလှတဲ့အချက်တွေရှိကောင်းရှိပါမယ်.။
အကယ်လို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ရနိုင်မဲ့အချက်တွေ လိုအပ်လာလို့် သမိုင်းတွေအရပြန်ကြည့်ရင်
ဆိုကြပါစို့..ကျနော်တို့သိထားတဲ့အထဲမှာ ကုန်သည်ညီနောင်ကို ဥက္ကလာပမင်းကြီးက ဗိုလ်တထောင်ဆိပ်ကမ်းမှာ လာရောက်ကြိုဆိုခဲ့ပြီး အဲဒီနေရာမှာပဲ စေတီတဆူတည်ထားခဲ့ပြီး စွယ်တော်တဆူကိုလည်းကို ဂ၀ံကျောက်အတွင်းမှာ ရွှေကြုတ်နဲ့ ထည့်ပြီးဌာပနာခဲ့တယ်ပြောကြတယ်။ ဒါကတော့ အစဉ်အဆက်လက်ဆင့်ကမ်းမှတ်ခဲ့တာပေါ့။ သို့သော် ဖြစ်နိုင်ခြေ အနေနဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ ဗုံးထိမှန်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်တထောင်စေတီကို ၁၉၄၉-၅၀ ပတ်သန်းကျင်မှာ ဦးနု၊ ဆာဦးသွင်တို့ဦးဆောင်ပြီး ပြန်ပြင်ဆင်ခဲ့ရာမှာ ဌာပနာကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး အများပြည်သူဖူးဖို့အတွက်လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ရာမှာ ဆံတော်အစစ်ကို လူအများဖူးခဲ့ကြရပြီး မှတ်တမ်းတွေအတိုင်းပဲ ဂ၀ံကျောက်အတွင်းမှာ ရွှေကြုတ်နဲ့ ထည့်ထားတာလည်းအမှန်လို့ပြောကြတော့ကာ..ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ရှိတဲ့ ဌာပနာကိုဖွင့်လို့မရတောင်မှ ဗိုလ်တထောင်ကဆံတော်ကိုများလေ့လာလိုက်မယ်ဆို သမိုင်းဖြစ်ရပ်တွေက ပိုပြီးပြည့်စုံမယ်ထင်တယ်..။(ဗိုလ်တထောင်ဘုရားက ဆံတော်ကိုအခိုင်အခံ့ ပြန်လည်ဌာပနာခြင်းမပြုဘဲ လုံခြုံရေးခိုင်မာစွာဖြင့်ထားရှိသည်လို့ ကြားဖူးပါ၏)
နောက်ဆက်စပ်ပြီးဖြစ်နိုင်ခြေတခုအနေနဲ့တော့ ဥက္ကလာပမင်းကြီးက ဆံတော်တွေကိုစေတီမတည်ခင် ကုန်းတော်ရွေးချယ်ရာမှာ ကနဦး ၉၉ ကုန်းအထိရှိခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးမှာစကာတင် ၂ ကုန်းအနက် ကမ္ဘာအေး(လက်ရှိစွယ်တော်နေရာ)ကုန်းနေရာကို ဂ၀ံသက်နုတာကြောင့် ပယ်ခဲ့တယ်လို့ အဆိုရှိခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း တချို့သောလေ့လာသူတွေအပြောအရဆိုရင် အဲဒီမြေနေရာဟာ တကယ်လည်းဂ၀ံမြေနု
ဖြစ်နေပြီး ကုန်းမြေနှစ်ခုရဲ့သက်တမ်းကိုသာနှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် တစုံတခုတော့အကျိုးရှိမယ်ထင်တာပဲဗျာ..
အပေါ်က အချက်တွေက ရွှေတိဂုံစေတီတော် နှစ်ပေါင်း၂၆၀၀ပြည့်ပွဲတော်ဆိုတာနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးကျနော်ညဏ်မှီသလောက်တွေးကြည့်တာပါ..။ အတွေးတိမ်တိမ်လေးနဲ့ပြောလိုက်မိတာ ဆိုပေမဲ့
တကယ့်လိုရင်းကတော့ ကဗ္ဘောဒီးယားတွေ အန်ကောဝပ်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သလို ကျနော်တို့တွေ ရွှေတိဂုံကိုရှေးမူလက်ရာအတိုင်း မထိန်းသိမ်းထားနိုင်တော့ပေမဲ့ သမိုင်းကွင်းဆက်တွေကိုတော့ ရနိုင်သလောက် နေရာပေါင်းစုံကနေရှာဖွေကြည့်စေချင်တာပါ.။ လက်တွေ့စနစ်ကျမှန်ကန်တဲ့အထောက်အထားတွေများရှိလာခဲ့ရင် ကျနော်တို့ ရဲ့တည်တံ့နေဆဲသာသနာအတွက်ရော သမိုင်းအတွက်ရော ပိုလို့တောင် ဂုဏ်ယူနေရဦးမှာပါ..။
ps. ဆက်စပ် အတွေးများသာမို့ မှားတာများခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါဗျာ..
ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ် လက်ရာတွေကို မပျောက်မပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ကလဲ ခက်သလား ကိုအမတ်ရေ
လက်ရာကိုတော့ သားစဉ်မြေးဆက် မစောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့ သက္ကရာဇ်ကိုတော့ အဆက်ဆက် လိမ်ပြောခဲ့လို့ ရမယ်မထင်ဘူးဗျ
အရင်က ရှေးဟောင်းလက်ရာတွေကို ခုလို ထိန်းသိမ်းရကောင်းမှန်း မသိခဲ့ကြလို့အခုချိန်မှာ
သက်သေအထောက်အထား မပြနိုင်တာကလွဲပြီး တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ သက်တမ်းဟာ မှတ်တမ်းကပြောတဲ့ သက်တမ်းထက်
ဤကမ္ဘာလောက၌ ဂေါတမ ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူခဲ့သည်မှာ နှစ် ပေါင်း ၂၆ဝဝ တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါ၏။ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဒုက္ကရစရိယာ အကျင့်မြတ်ကို ခြောက်နှစ်မျှ ကျင့် တော်မူပြီးနောက် သဗ္ဗညုတ ရွှေ ဉာဏ်တော်ကို ရရှိတော်မူခဲ့ပါ၏။ ဘုရားရှင်အဖြစ်သို့ ရောက် တော်မူပြီး သတ္တာ သတ္တဟ စံနေ တော်မူစဉ် မွန်နိုင်ငံတော် အသိ တဥနာဂိုရ် ပြည်မှ ကုန်သည် ညီ နောင်ဖြစ်သော တဖုဿနှင့် ဘလ္လိက တို့သည် ရာဇယတနတွင် ဗုဒ္ဓအား ဖူးမြော်ခွင့်ကြုံပါ၏။ ဘုရားရှင်က တရားတော်များ ဟောကြားတော်မူ ပြီး ဆံတော်များကို ပူဇော်ရန် ပေး ခဲ့သဖြင့် လက်ခံပြီး နေရပ်သို့ပြန်လာ ပါ၏။ ထိုဆံတော်များကို ဋ္ဌာပနာ တော်မူ၍ မဟာသက္ကရာဇ် ၁ဝ၃ ခုနှစ် တပေါင်းလပြည့်နေ့တွင် ရွှေ တိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးကို တည် တော်မူခဲ့သည်ဟု အဆိုရှိပါ၏။ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ဘုရား အဖြစ်ရောက်တော်မူပြီး ၄၅ ဝါ ပတ်လုံး တရားတော်များ ဟောကြား ကာ သတ္တဝါဝေနေယျတို့ကို ကယ် ချွတ်တော်မူခဲ့ပါ၏။ ထိုဘုရားအဖြစ် ရတော်မူသော ၄၅ ဝါ၊ (၄၅)နှစ်နှင့် သာသနာနှစ် ၂၅၅၅ ကို ပေါင်း သော် နှစ်ပေါင်း ၂၆ဝဝ ဖြစ်ပါ၏။
သမိုင်းပညာရှင်တွေပြောတာမှာ.. ခေတ်ပြိုင်လက်ရာတွေနဲ့ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့.. ငုံပြီး..ဖျက်ပြီး..ဆောက်လုပ်လေ့ရှိတဲ့..အကျင့်စရိုက်ကို မသိပဲ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး..။
တကယ်က.. စေတီတည်တတ်တဲ့.. အသိပညာကိုက.. ဂေါတမဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး.. နှစ်၃ရာလောက်ကြာမှ… အသောကမင်းလက်ထက်လောက်မှာ.. စကြိုးစားကြတာပါ…။
Sacred Sites of Burma ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲ..။ ဗိုလ်တထောင်စေတီအကြောင်းပါ အသေးစိတ်..ပုံတွေနဲ့ရေးထားတယ်..။
အဲဒီစာရေးဆရာ(Donald M. Stadtner)က.. ဆန်ဖရမ်စစ်စကိုနားတင်နေတာ..။ သူ့ကို.. စာပေဟောပြောပွဲလုပ်ရင် ဖိတ်မလားလို့.. တွေးထားတာပဲ..။ မေးစရာလေးတွေ မေးလို့ရတာပေါ့..။
နောက်ပြီး..ဒီခေတ်မှာ ကာဗွန်နဲ့သက်တန်းတွက်နည်း(Carbon 14 Dating)တွေရှိပါတယ်..။
ခရစ်ယန်တွေကတော့..ခရစ်တော်ကားစင်ပေါ်ကအချမှာခြုံပေးတဲ့.. စောင်( Shroud of Turin) ကိုတောင်.. ကာဗွန်တွက်နည်းနဲ့.. စစ်ဆေးဖူးတယ်..။
စစ်ဆေးချက်အရ.. ခြုံစောင်အစစ်မဟုတ်ဖူးဆိုတာ.. ကြေငြာပါတယ်..။
နှစ် ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်… ရွှေတိဂုံဟာ.. လှပခန့်ညားပြီး..အနုပညာတွေနဲ့.. မွှန်းထုံနေတာပါ..။
ဒီလို.. တိုးရစ်တွေကျလာတဲ့.. နှစ်တွေမှာ.. ဒေါ်လာသန်းချီရှာပြီး.. မြန်မာတွေဘ၀..အဆင်ပြေအောင်.. အလုပ်အကိုင်သစ်တွေရအောင်.. ကြိုးစားသင့်ကြောင်း…..။
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်း အဲဒီလို သိပ္ပံနည်းကျစစ်ဆေးခံကြည့်ချင်ပါတယ်။
တနေ့က ရွှေတိဂုံ ဆံတော်ရှင် စေတီတော် နှစ် ၂၆၀၀ ပြည့်တရားပွဲ ကိုသွားခဲ့တယ်။
သီတဂူ ဆရာတော် ကြီး ဟောတဲ့ တရားတော် ကို ရှာပြီး နာကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
အချက်အလက်တွေ အများကြီး ပါတယ်။
မင်းပေါင်း ၃၂ ဆက် ပြုပြင်ခဲ့တယ်။
ပုဂံခေတ် အနော်ရထာ မတိုင်ခင် ခေတ် သရေခေတ္တရာ ခေတ်ကတည်းက ပြုပြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း မှတ်တမ်းတွေ ထုတ်ပြလိမ့်မယ်။
ရွှေတိဂုံနဲ့ ပတ်သတ်လို့ မှတ်တမ်း တော်တော် စုံစုံလင်လင် ထုတ်ပြဟောသွားပါတယ်။
ည ၈နာရီ ခွဲမှာ စဟောတဲ့ တရားကို ည ၁၀နာရီ ၄၅ မိနစ် အထိ မနားတမ်း တခုပြီး တခု ဟောသွားတယ်။ ဒါတောင် အတိုချုံး ဟောသွားပါ။
တကယ်ကို အနှစ်ပြည့်ဝတဲ့ သမိုင်း နောက်ခံတွေပါ ပါအောင် ပြောသွားပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ပဲ နာခဲ့တာ အသံ မသွင်းခဲ့တဲ့ အတွက် အသံဖိုင် ထွက်ရင်တော့ မျှပေးပါ့မယ်။ နီးစပ်ရင် ရှာဝယ်ပြီး နားထောင်ကြည့်ပါ။ ၀ိပသနာ ဟောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သမိုင်း နောက်ခံ ကို ကျမ်းပြု ဆရာ တယောက် ပြောသလို ပြောသွားတာပါ။
ဟုတ်တယ်ဗျာ။ရှင်ဥာဏိသရ တရားခွေလေး နာချင်မိလာပီဆူးရေ။
မှတ်သားရမှာတွေ အများကြီးနေမှာနော်။သမိုင်းကွင်းဆက်မပြတ်ဖို့ လဲလိုတယ်လေ။
နောက်ပြီးတော့ သမိုင်းအထောက်အထားတွေ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးသင့်တယ် ထင်ပါ
တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ပြောကြည့်ချင်ပါတယ်။ ယခု သာသနာတော်နှစ်က-2555-ပါ အဲဒီနှစ်ကို စတင်ရေတွက်တာက မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ်ဗာန်စံတော်မူသည့်နောက်ပိုင်းကစတင်ရေတွက်သည်ဟု မှတ်သားဖူးပါသည်။ ရွှေတိဂုံစေတီတော်တွင်ဌာပနာထားသည်က မြတ်စွာဘုရား၏ဆံတော်များဖြစ်ပါသည်။ ထိုဆံတော်များကို မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူစအချိန် (သာသနာတောင်ပြန့်ပွါးထွန်းကားမှုမရှိသေးပါ၊ ရဟန်းသံဃာတို့ပင်မရှိကြသေးပါ) မြန်မာနိုင်ငံသား တပုသ်သ နဲ့ ဘလ္လိက ကုန်သည်ညီနောင်တို့ မဇ္ဈိမဒေသကို ကုန်သွယ်သွားရင်း ဆွေမျိုးဟောင်းနတ်သားတစ်ယောက်က အသိပေး လမ်းညွှန်လို့ မြတ်စွာဘု၇ားနဲ့တွေ့ပြီး ဒွေဝါစိကသရဏဂုံ(ဘုရား+တရား)တည်ပြီး မြတ်စွာဘု၇ားချီးမြှင့်တော် မူသည့် ဆံတော်၆-ဆူ(လားမသိ) ကို ဥက္ကလာပမင်းနှင့်တကွအားလုံးသောပြည်သူတွေ သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုကာ စေတီတည်ထားပူဇော်ကြသည်-လို့ မှတ်သားဖူးပါသည်။ ဆိုတော့ကာ အထက်ကသာသနာတော်နှစ် 2555-မှာ မြတ်စွာဘုရား ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီး သီတင်းသုံးနေတော်မူခဲ့တဲ့ 45-နှစ်ကိုထည့်ပြီးပေါင်းလိုက်မည်ဆိုလျင် သာသနာ-2600-ပြည့်လို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ အပြည့်အစုံတော့မဟုတ်ပါ၊ မှတ်မိသလောက်ကိုရေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီမန္တလေးဂဇက်ကလည်း မှတ်တမ်း မှတ်ရာတစ်ခုအဖြစ်ရှိနိုင်သည်မို့ ကျနော်ရေးတဲ့အထဲက အမှားများပါရှိပါက ပြင်ဆင်ပေးကြပါ။ ကျေးဇူးပါ။
အပေါ်က ကွန်မန့်ပေး သူများအားလုံးကို ကျေးဇူးပါဗျာ..
ကျနော်စိတ်ထဲ ဖြစ်စေချင်တာကတော့ ပြတ်နေတဲ့သမိုင်းကွင်းဆက်တွေကို
တတ်နိုင်ခဲ့ရင် လက်တွေ့ အထောက်အထားတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးဖော်ထုတ်စေချင်တာပါ..
ရှာဖွေလို့ရနိုင်တဲ့ အထောက်အထားတွေလည်းရှိနေတော့ကာ.မှန်ကန်ပြည့်စုံသွားရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ ဗျာ..
ကိုမတ်ကြီး က မျိုးကြီးသီချင်း ဆိုခဲ့တာဘဲ ။
အားပေးသွားပါတယ် ခင်ဗျ ။
ခုမှ ဖတ်ရလို့ ခုမှ ကွန်းမန့်ပေးရပါတယ်ဗျာ။